ပြည်သူများအတွက် MRCCI အသင်း မှ ဦးဆောင် ၍ ဆန်နှင့် ကြက်ဥ များအား သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် မန္တလေး မြို့တွင်း လှည့်လည်ရောင်းချပေးမည် – Na Pann San
ပြည်သူများအတွက် MRCCI အသင်း မှ ဦးဆောင် ၍ ဆန်နှင့် ကြက်ဥ များအား သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် မန္တလေး မြို့တွင်း လှည့်လည်ရောင်းချပေးမည်
Na Pann San W | March 17, 2020 | Local News | No Comments
မန္တလေး အတွက် သတင်းကောင်း ….
ဒါ မျိုး ရန်ကုန် နဲ့ အခြားမြို့တွေမှာလည်း လုပ်ပေးသင့် ပါတယ် ။
MRCCI အသင်း မှ ဦးဆောင် ၍ ဆ န်နှင့် ကြက် ဥများအား သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် မန္တလေး မြို့တွင်း လှည့်လည် ရောင်းချပေးမည်….
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic) အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာခဲ့သည့်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည် များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MRCCI) မှ ဦးဆောင်၍ ညီနောင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသင်း အဖွဲ့များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် Covid -19 နှင့် ပတ်သက်၍ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း စိုးရိမ်မှုများကြောင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်များ ဝယ်ယူ စုဆောင်း လျက်ရှိရာ ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုများ မရှိစေရေး၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ များ စိုးရိမ်မှုများ မရှိစေရေးတို့အတွက်အခြေခံ စားသောက် ကုန်များဖြစ်သော ဆန်နှင့် ကြက်ဥများအား မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ လှည့်လည်ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က အဆိုပါ အသင်းရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် MRCCI အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းက အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာကြသည့် MRCCI အသင်း EC/CEC များ၊ ညီနောင် အသင်း များမှ တာဝန်ရှိသူများက Covid- 19 နှင့် ပတ်သက်၍ လတ်တလော အခြေအနေများ၊ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး ဆိုင်ရာများ၊ အခြေခံ စားသောက်ကုန်များဖြစ်သော ဆန်၊ ဆီ၊ ကုလားပဲ ဈေးနှုန်း အခြေအနေများကို နေ့စဉ်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အများပြည်သူ သိရှိနိုင် ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
MRCCI အသင်းအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ပိုမို ထိရောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်လျက်ရှိနိုင်သော နေရာများတွင် ဆန်နှင့် ကြက်ဥများကိုလာမည့် မ တ် ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မန္တလေးစက်မှုဇုန်နှင့် ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်များရှိ အခြေခံလုပ်သားများ၊အခြေခံလူတန်းစားများကို လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် လှည့်လည် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး မန္တလေးခရိုင် အတွင်းရှိ မြို့နယ်အားလုံးတွင် ဆက်လက်ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း MRCCI အသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးကျော်ဝင်း က ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် Covid -19 နှင့် ပတ်သက်၍ ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း စိုးရိမ်မှုများ မရှိစေရေးတို့အတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များအလိုက် ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် လက်ဆေးရည်များ ဝေငှခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန် စစ်ဆေးတိုင်းတာပေးခြင်း၊ ပညာပေးပိုစတာများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……သန်းဇော်မင်း(ပြန်/ဆက်) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မင်္ဂလာသတင်းလေးပါ… ဒီကနေ့ ဇူလိုင် ၁ ရက် သရုပ်ဆောင် မေသန်းနု ထောင် က လွတ်ပြီ
ထီဖွင့်ပွဲ ၂ ရက်ပေါင်း ( ၁၅ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် ပေါင်းချုပ် စဆုံး
လူနာနံပတ် ( ၃၃ )အမျိုးသမီး ၏ အမျိုးသားနှင့်ကလေးကို အင်းစိန်ဆေးရုံမှ ပြန်လွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုကာ အဆောင်သို့ ပြန်လာသဖြင့် အဆောင်မှလက်မခံဟုဆို